BREAKING: नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमण पुष्टि, अब सरकारले के गर्ला ?
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » BREAKING: नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमण पुष्टि, अब सरकारले के गर्ला ?
भारतको साथसाथै विश्वभरिका कैयन् देशहरूमा पनि ओमिक्रोन सङ्क्रमणमा तेज वृद्धि पाइएको छ।
अमेरिकाको १५ राज्यमा ओमिक्रोन सङ्क्रमण फेला परिसकेका छन्।
ब्रिटेनले पनि ओमिक्रोनको चिन्ताका कारण नाइजिरियालाई उसको ‘यात्रासम्बन्धी रातो सूची’मा राखिदिएको छ।